Warbaahinta Dalka Masar oo si yaab leh Indhaha uga Qarsatay Geeridii Mursi iyo Dawladda oo diiday in la baadho | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Jun 20, 2019 - Aragtiyood
London ( Kalshaale ) Dawladda Masar ayaa Qaramada Midoobay ku eedeysay inay siyaasadeeneyso geerida madaxweynihii hore ee dalkaas Maxamed Morsi, Kadib markii ay ku baaqaday “baadhitaan madax-banaan” oo lagu sameeyo sababta uu u dhintay.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha diebdda Masar Ahmed Hafez ayaa “sida ugu xooggan” u cambaareeyey baaqa afhayeenka guddiga Qaramada Midoobay ee xuquuqda aadanaha, Rupert Colville oo dalbaday in si madax-banaan loo baadho geeridaMaxamed Mursi oo Isniintii ku dhintay maxkamad ku taalla magaalada Qaahira, Wuxuuna xusay in tani ay tahay “isku day ula kac ah oo lagu siyaasadeynayo geeri si caadi ah ku timid.”
Dhinaca kale Geeridii Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee Masar waxa ay ciwaano waaweyn u samaysay guud ahaan warbaahinta caalamka, balse taas xaalka waa uu ka duwanaa qalabka warbaahinta dalkii uu muwaadhinka ka ahaa, marna madaxweyne kasoo noqday intii aanan la afgambinin.
Idaacadaha la’iska arko iyo waliba wargeysyada waxa ay ahaayeen inta badan kuwa gabi ahaanba aanan soo hadal qaadin in uu geeriyooday Mursi, taas badalkeeda waxaaa boggaga hore ee wargeysyada qabsaday warar ku saabsan tartanka kubbada cagta ee Afrika ee halkaas ka socda.
Taleefishinka dowladda ayaa si darajadeedu hooseysa u xusay geerida Mursi, balse ma aysan sheegin in uu ahaan jirey madaxweynaha Masar, Wuxuuna Warka ahaa mid aad u kooban, wuxuuna kaliya ahaa 42 erey oo afka Carabiga ah.
Arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa illaa heerka dowladda Masar ay u maamusho warbaahinta dalkaas, islamarkaasna u xanibtay wararka ku saabsan geerida Mursi oo aad looga gilgishay.